Gịnị kpatara mkpụrụ obi Californian? - Ngụda na Alaeze ahụ
Mgbe ihe dị ka afọ isii gachara, nwoke ahụ malitere anya nuru olu Jisos (ihe anakpo “ebe anakpo”). Onweghi oghogo ma obu nghota nke okwukwe nke Katoliki, ya mere olu Jesu majara ya na anya. Na agbanyeghị na okwu ụfọdụ nke Onye nwe ya bụ ịdọ aka na ntị, ọ kọwara olu Jizọs dịka ọmarịcha ma dịkwa nwayọ. Ọ natakwara nleta site na St. Pio na mpaghara si n'aka St. Thérèse de Lisieux, St. Catherine nke Siena, St Michael Onye isi ndị mmụọ ozi na ọtụtụ ebe si n’aka Nwanyị anyị mgbe ha nọ n’ihu Sacrament ahụ dị ngọzi. Mgbe ezigasịrị ozi na nzuzo nke afọ abụọ (naanị onye a maara nwoke na ikwupụta ya n’ọdịnihu nke naanị Onye-nwe mara) ebe ndị ahụ kwụsịrị. Jizọs gwara nwoke ahụ, "A ga m akwụsị ịgwa gị okwu ugbu a, mana mama m ga na - eduzi gị."
Di na nwunye a ka a kpọrọ ha ka ha bido ileba anya na Marian Movement of O nchụàjà ebe ha ga-atụgharị uche na ozi nke Nwanyị nwanyị anyị zigaara	Fr. Stefano Gobbi . Ọ bụ afọ abụọ n'ime ọgbụgba ndị a ka okwu nke Jizọs mezuru: Nwanyị nwanyị anyị malitere idu ya, mana n'ụzọ kachasị dị oke mkpa. N'oge mgbochi, na n'oge ndị ọzọ, nwoke a na-ahụ “ikuku” n'ihu ya nọmba nke ozi a na-akpọ "Akwụkwọ na-acha anụnụ anụnụ,"Nchịkọta nke mkpughe nke nwanyị anyị nyere	Fr. Stefano Gobbi , "Nye Pkọchụ-aja nke ụmụ anyị hụrụ n'anya nke Nwanyị."
Ma di na nwunye na-ata ahụhụ nke ukwuu maka ozi ha, mana na-enye ya Onyenwe anyị maka nzọpụta nke mkpụrụ obi. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na nwoke a mere ọ bụghị gụọ ihe Akwụkwọ Blue rue taa (dika mmuta ya nwere oke akwukwo ma nwee nsogbu igu akwukwo). N'afọ ndị a, ọnụọgụgụ / nọmba ndị ahụ ga-anwale ga-egosi na oge a na-apụghị ịgụta ọnụ nke mkparịta ụka mkparịta ụka na ngọngọ ha, ma taa, ihe ndị na-eme gburugburu ụwa. Fr. Ozi Gobbi kụrụ ada mana ọ na-achọta mmezu ha ugbua.
Ozi sitere na Mkpụrụ Obi Californian
Mkpụrụ obi California - Ozi Ikpeazụ
... n'ọnụ ụzọ Ebere.
nkwupụta, Ebere Chukwu, site, Ìhè nke Akọ na Uche, ebere, tupu, nchegharị, ịdọ aka na ntị
Mkpụrụ obi Californian - Mediatrix of Grace
Abụ m ụzọ tozọ.
Nne di ngozi, ngalaba-redemptrix, ido-nsọ, arịrịọ, Mary, ogbugbu, nne, amaghị nwoke
Mkpụrụ obi Californian - Okporo ụzọ nke ihe omume na-egbu mgbu
Kpọkọtanụ na ndị agha m.
onye katoliki, ụka, ido-nsọ, obi, idi ocha, echiche zuru oke, ọcha, tụkwasị obi
Mkpụrụ obi Californian - Oge Awa nke Ike Mmụọ Ozi
Ha na-eduzi ụmụ m niile n'ọgbọ agha ahụ.
ndị mmụọ ozi, archangels, agha, Gabriel, michael, nchedo, Raphael, Mkpagbu
Mkpụrụ obi Californian - Ekwela ka O duhie
... site n'okwu, onyonyo na ihe ọjọ nke oge gị.
aghụghọ, diabolical, Obi Obi Anyi, Jesus, ụgha, Mary, foto gba ọtọ, seduction
Mkpụrụ obi Californian - Chineke nọnyeere gị!
A na m akwado gị maka ọchịchị ịhụnanya na udo ya.
ụka, ọchichiri, Oge nke Udo, ìhè, abalị, ahuhu, ọchịchị, Mkpagbu, mmeri, anya, Ịdọ aka ná ntị
Mkpụrụ obi Californian - Ọrụ M nyefere Gị
Mee ka nkpuru obi bata n’ime ulo nke Obi M N’ebughi Onye obula.
ụgbọ, cenacle, kpokọta, Enyemaka, Obi Obi Anyi, ekpere, na-eru, mmezi, Rosary
Mkpụrụ Obi Californian - Ike nke Hel agaghị enwe mmeri
Jizọs hiwere Nzukọ-nsọ ​​Ya n’elu Peter.
onye katoliki, oche, ụka, Jesus, Pita, mmanụ aṅụ, rock, Rome
Mkpụrụ obi Californian - Chọọchị Na-ata Ahụhụ
N'oge na-adịghị anya site na mgbu anyị, oge ọhụụ ...
ụka, Oge nke Udo, ahuhu, ọcha, mbilite n'ọnwụ, iru-újú, -ata ahụhụ
Mkpụrụ obi Californian - Oge ụma nke ịma mma m
Gbasaa ọkụ nke okwukwe n'oge oke ndapụ n'ezi ofufe.
Ndapụ n’ezi ofufe, ụka, Oge nke Udo, okwukwe, nwadiana, obi, idi ocha, ahuhu, ekpere, ụzarị ọkụ, tụkwasị obi
Mkpụrụ obi Californian - Onyenwe anyị na-abịa
Soro nne gi bia zute Ya.
Oge nke Udo, Obi Obi Anyi, Jesus, Mary, tupu, Mmeri
Mkpụrụ obi Californian - Oge Nnukwu Ọnwụnwa
Oge ikpe abịa ...
nkwupụta, Obi Obi Anyi, ime mgbu, Mary, nchedo, ebe mgbaba, sacrament, Mkpagbu
Mkpụrụ obi Californian - Onye nchebe na onye na-agbachitere ya
... na ihe nhụjuanya na-echere gị.
onye agbachitere, nchedo, ọcha, ebe mgbaba, abụrụ joseph, oké ụjọ nke ndị mmụọ ọjọọ, Mkpagbu
Gisella - Oge Ebere emechiela
Igwe na-acha anyanwụ ga-emetụta teknụzụ.
mmeghasị, ala ọma jijiji, okwukwe, njali elu, okporo, ike, ekpere, maa jijiji, anyanwụ, technology, testing, ikpe, Mkpagbu, tụkwasị obi
Mkpụrụ Obi Californian - Oge M Abịala
Oge nke m buru amụma na Fatima abịawo.
akita, ọdịdị, Fatima, nwadiana, ahuhu, Mkpagbu, Mkpagbu
Mkpụrụ obi Californian - Oge Awa nke Ọchịchịrị
Ọ bụ nsusu ọnụ, Judas, ka ị rara Nwa nke mmadụ nye?
Ndapụ n’ezi ofufe, mgba okpuru, ndị bishọp, ụkọchukwu, ọchichiri, awa, ikpe, -nchu-àjà, fọdụrụnụ, Mmeri
Mkpụrụ Obi Californian - Ike nke obere
Aga m emeri ike dị ukwuu nke Setan.
Mkpụrụ obi Californian - Nye M Ifuru A
Achọrọ m ka nne m ọnụnọ chere.
bouquet, ido-nsọ, eche echiche, okooko osisi, Obi Obi Anyi, Mary, nne, ekpere, gbachi nkịtị, Mmeri
Mkpụrụ Obi Californian - Gịnị Mere M Ji Ibe M Anya ?ta?
akita, ahuhu, Fire, Japan, Mary, nne, ọcha, fọdụrụnụ, nchegharị, anya mmiri
Mkpụrụ obi Californian - Oge Ọnwụnwa abịawo
... n’ihi ekwe-ekwe nke obi.
akita, onye katoliki, ahuhu, ụka, Fire, Obi Obi Anyi, Nwanyi anyi, ọcha, ebe mgbaba, Ịdọ aka ná ntị
Mkpụrụ obi Californian - Anya mmiri m
Oge inye ntaramahụhụ eruola.
ahuhu, ụka, Ebere Chukwu, Fatima, ikpe ziri ezi, Mary, nne, ọcha, mmehie, ihe oyiyi, anya mmiri, na-akwa ákwá
Mkpụrụ obi Californian - Anchor nke Nzọpụta
Na-emegide Kraịst ga-elu na ike.
arịlịka, Na-emegide Kraịst, Coronavirus, Covidien-19, ọrịa, ntiwapụ, hell, Mary, ọrịa, ogwu
Mkpụrụ obi Californian - Emehiela Ọzọ
Nke a bụ oge ikpe ziri ezi na ebere.
ahuhu, ala ọma jijiji, okwukwe, Obi Obi Anyi, ikpe ziri ezi, Mary, ebere, nne, nchegharị, mmehie, amaghị nwoke, ugwu ugwu
Mkpụrụ obi Californian - Ekpughela ihe niile
Kwadebe maka ọmụmụ nke abụọ nke Jizọs.
amụ nwa, Krismas, ụka, desert, ndị mba ọzọ, dike, jews, arụ ọrụ, ahuhu, ndị mmadụ, abụrụ joseph
Mkpụrụ obi Californian - Na Obi nke Chọọchị
... Mmeri ahụ amaliteworị.
Oge nke Udo, Obi Obi Anyi, Popu, nchụàjà, -nchu-àjà, Mmeri
Mkpụrụ obi Californian - Akara nke anụ ọhịa
Binye aka na akara nke nne m, kama nke a.
Na-emegide Kraịst, apocalypse, anụ ọhịa, ọkpọiso, gobi, aka, john, akara, echiche
Mkpụrụ obi Californian - m na-agbadata
... ka e wee kpughee ihe nzuzo ikpeazụ.
Na-emegide Kraịst, ụka, ido-nsọ, Oge nke Udo, Fatima, Mkpagbu, Popu, ọcha, Russia, nzuzo, Mmeri
Mkpụrụ obi Californian - Mmasị nke Churchka
Jikere onwe-unu ịrị Calvary.
ụka, ọnwụ, ezigbo Fraịdee, Jesus, nwụrụ, Mary, nne, ahuhu, nchụàjà, mbilite n'ọnwụ, -ata ahụhụ, Mmeri
Mkpụrụ Obi Californian - Nwee Obi Ike!
N’ime Obi M N’eziokwu, ị ga-a joyụrị ọ joyụ.
afọ, Uche Chukwu, Oge nke Udo, mmezu, Obi Obi Anyi, alaeze, Mary, plan, Mmeri
Mkpụrụ obi Californian - Mmụọ ozi nke ọrịa mbụ
A na-eziga ndị mmụọ ozi na ihe otiti ha ...
angel, ahuhu, ọnwụ, anụ, adịghị ọcha, ikpe ziri ezi, ọrịa, ọrịa, foto gba ọtọ, ọcha, mmekọahụ, mmehie, Mkpagbu
Mkpụrụ obi Californian - Ihe egwu dị na egwu gị
Ihe jọgburu onwe ya bụ ịrata ụwa.
Nne di ngozi, arụ ọrụ, nkwupụta, mgbasa, ndọpụ uche, okwukwe, ahụ ike, Mary, ọrịa, ekpere, mmekorita, ọrịa
Mkpụrụ obi Californian - Obi Stọ Gị
Ahapụ ndị enyi jụrụ.
ụka, Obi Obi Anyi, arịrịọ, Mary, ahuhu, nchegharị, mmezi, -ata ahụhụ, nkpuru obi
Mkpụrụ obi Californian - Schism ga-abịa
Ebere ga-enwe mmeri.
Na-emegide Kraịst, Ndapụ n’ezi ofufe, ahuhu, Daniel, onye amuma ugha, amụma, ọcha, ndudue
Mkpụrụ obi Californian - ọchịchị ya na-abịa
Ọ dịla n’ọnụ ụzọ ámá.
Oge nke Udo, gobi, Obi Obi Anyi, Jesus, alaeze, ọchịchị, Stefano, Mmeri
Mkpụrụ Obi Californian - A Ga-emezu Ihe Niile
Na-eduga na Pentikọst ọhụrụ.
Mkpụrụ obi Californian - Obi M na agba obara
Ndi mmadu anabataghi oku m
ọbara ọgbụgba, akwụkwọ acha anụnụ anụnụ, Ichie stefano gobbi, Obi Obi Anyi, nne, eduat, iru-újú
Mkpụrụ obi Californian - Onye Kwesịrị Ntụkwasị Obi, Kwesịrị Ekwesị, ma Na-erube Isi
Mgbe ahụ Kraịst ga-alaghachi iji weghachi ọchịchị nke ịhụnanya ya.
Oge nke Udo, ikwesị ntụkwasị obi, nrubeisi, Popu, nchụàjà, -nchu-àjà, Mmeri
Mkpụrụ obi Californian - Ihe egwu dị na egwu
Ihe egwu di ndu bu nke uwa.
obi ike, nkụda mmụọ, lara .ara, ekpere, Rosary, sacrament, ọnwụnwa
Mkpụrụ Obi Californian - Nwee Obi Ike na Nne Gị
Bụrụ onye akaebe nke okwukwe n’oge ndị nke ezi ofufe dapụ.
obi ike, Mary, ekpere, nchụàjà, -nchu-àjà, Rosary, tụkwasị obi
Mkpụrụ obi Californian - Nzaghachi gị
Oge ị ga-ebuso ndị mmadụ agha abịawo.
obi ike, gobi, ekpere, -nchu-àjà, nzaghachi, Stefano
Mkpụrụ obi Californian - Ọchịchị Na-abịanụ nke Kraịst
Dị ka ọ dị n’eluigwe, otu a ka ọ ga-adị n’ụwa.
Kraịst, Oge nke Udo, Oriri Nsọ, ọchịchị, Mmeri
Mkpụrụ obi Californian - Mary Na-ahụ Hermụ Ya Anya
Nkwenye na-enweghị atụ.
agha, ido-nsọ, dragon, akara, nwaanyị
Mkpụrụ obi Californian - Lelee anya na Paradaịs
Ndi mmadu na - eme njem nke nnupu isi.
Mkpụrụ obi Californian - Ọnyà nke Nkụda Mmụọ
Nwere ike 4, 2020
Jiri ekpere na-aga n'ihu wee sie ike.
Ndapụ n’ezi ofufe, Obi Obi Anyi, Mkpagbu, Popu
Mkpụrụ obi Californian - Hel agaghị enwe mmeri
Ọ bụ ndị nọchiri anya ọrụ ahụ e nyere Pita.
Mkpụrụ obi Californian - Satọde nke Ezigbo Obi M
Taa, achikọtara m gị na ogwe aka nke nne m…
onye californian, Fr. Gobi, Nwanyi anyi, Ụbọchị izu ike, újú
Mkpụrụ obi Californian - Oge Awa nke Obi Stọ M
Emeela ka likeka dịka Ọkpara m, nọnyeere ya ma gbahapụ ya…
Mkpụrụ obi Californian - Oge agha
Nke a bụ nnukwu ọgụ m! Ihe ị na-ahụ na ihe ị na-ebi n'ụdị akụkụ nke atụmatụ m.
Ana m emepe Akwụkwọ a Doro Anya
M na-emeghere gị Akwụkwọ a kaa akara, ka ekpughee ihe nzuzo dị na ya.
Fr. Stefano Gobbi - M na-ekekọrịta Oge mgbu
Mụ onwe m na-eso gị bikwa mgbe ebighachi oke ihe mgbu ndị a.
← Gịnị kpatara Fr. Michel Rodrigue? A
Ndị ụjọ kpọnwụrụ January 23, 2022
Luz - Ugbu a bụ oge! January 22, 2022
Nyefee ihe niile January 22, 2022